War Culus:Gudiga Difaaca Baarlamaanka oo ku baaqey in Ciidamada Kenya iskaga baxaan Gobolada ay joogaan wadanka Soomaaliya – idalenews.com
War Culus:Gudiga Difaaca Baarlamaanka oo ku baaqey in Ciidamada Kenya iskaga baxaan Gobolada ay joogaan wadanka Soomaaliya
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Difaca Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa ku baaqey in Ciidamada Dowlada Kenya ay iskaga baxaan Gudaha Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade oo Wareysi dheer dhinacyo badan taabanaya la yeelatay mid ka mid ah Idaacadaha gudaha ayaa sheegay ineyna ku wanaagsanayn sii joogista Ciidamada kenya dalka soomaaliya maadaama ay laayeen maati badan ayuu yiri.
Gudoonka ayaa intaas ku daray in ciidamada dowlada Kenya ee ku sugan Jubooyinka ayna xernayn Dareeska ciidamada AMISOM balse ay xeren yihiin dareeska qaas ka u ah ee dowlada kenya sidoo kalane Dekada Kismaayo ka wada dhoofinta Dhuxul ay dowlada horay u mamnuucdey in laga dhoofiyo dalka.
Xildhibaan Xaabsade oo ah Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Difaca Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay Amni darada beryahaaan lasoo dereska shacabka reer sh.hoose isagoona madaxda amniga dowlada ugu baaqey iney wax ka qabtaan ciidamada dowlada ee isbaarooyinka dhigtay gobalkaasi.
Ugu dambeyn Xildhibaan Xaabsade ayaa soo dhaweeyay ku biiritaanka Ciidamada Ethiopia howlgalka AMISOM isagoona sheegay iney dowlada soo dhaweyneyso Howlgalka ciidamada itoobiya ee Alshabaab loogaga saaraayo Gobalada Dalka.
Hadalka Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Difaca Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Xaabsade ayaa kusoo beegmaya xili DFS ay qorsheyneyso in Ciidamada Kenya laga wareejiyo Jubooyinka sidoo kalane Madaxda Raaskambooni ee Ciidamada Kenya ku dugaashada Kismaayo ay diideen in Kenya laga wareejiyo gobalada Jubooyinka.
Imaaraadka carabta oo Mashaariic Horumarineed ka fulinaya wadanka Soomaaliya.
Dhageyso: Dr C/raxmaan Baadiyow oo khudbad qiimo badan kaga hadlay dowladnimada, mideynta Somalida iyo hab dhaqanka siyaasiyiinta hogaanka dalka